Chatroulette အက်ပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကျပန်းလူများနှင့် စကားပြောရန် ခွင့်ပြုသည်။ချတ်သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင် စာရင်းသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ အမည်ဝှက်ထားခြင်းကို သေချာစေသည်။သင်သည် စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုနှင့် အသံချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ချတ်သည် လုံးဝအမည်မသိ၊ မှတ်ပုံတင်ရန် လုံးဝမလိုအပ်ပါ။အက်ပ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ချက်ချင်း ချတ်လုပ်နိုင်သည်။စကားဝိုင်း၏ရွေးချယ်မှုသည် ကျပန်းအစီအစဥ်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။အကယ်၍ စကားဝိုင်းသည် အဆင်မပြေပါက၊ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် နောက်ထပ် စကားဝိုင်းသို့ ပြောင်းနိုင်သည်။နေ့စဉ် အနည်းဆုံး အသုံးပြုသူ 200,000 သည် စကားပြောခန်းတွင် ထိုင်နေသောကြောင့် သင်အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော စကားဝိုင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။အသံနှင့် ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် စာတိုချတ်တွင်သာ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ChatRoulette တွင် အမှာစာထားရှိရန် ထိန်းညှိမှုရှိပါသည်။အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူသည် သင့်လျော်စွာပြုမူပါက၊ ဤအရာကို ထိန်းညှိသူထံ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူကို ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်သည်။
ချတ်သည် လုံးဝအမည်မသိ။သင့်ချစ်သူကို ပြောပြရန် သင့်ကိုယ်သင် မည်သည့်အချက်အလက်ကို သင်ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။
Onanyugi နဲ့ ချက်တင်ကစားတဲ့ ⁠နေရာ⁠ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကမေးခွန်းကဘာလဲ။အဘယ်ကြောင့် snils လိုအပ်သနည်း ။ငါလည်း ပေါင်းလိုက်မယ် - ငါဘာကြောင့် အမိုက်စားလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ငါမသိဘူး။
- သားကောင်၊ မင်းမှာကြမ်းတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပြောပြပါဦး။
- ကောင်းပြီ၊ မနက်အိပ်ရာက နိုးလာတယ်၊ (ကောင်းပြီ၊ ငါအမြဲတမ်း လန့်နေတာပဲ။
နိုးလာတော့) မီးဖိုချောင်ကို သွားပြီး ရေနွေးအိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်၊
(အင်း၊ ငါက ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ထားရင် အမြဲတမ်း တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေတယ်။ရပါတယ်၊ ရေသွားချိုး၊
ရေချိုး၊ t-t-mask (ကောင်းပြီ၊ ငါရေချိုးတဲ့အခါ အမြဲတမ်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ)။ဤတွင် ဆိုလိုသည်မှာ၊
ရေချိုးခန်းထဲက ရုတ်တရက် တံခါးခေါက်သံ မြည်တယ်။ငါဖွင့်ဖို့သွားခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါ လန့်သွားတယ် (ကောင်းပြီ၊ ငါ တံခါးဖွင့်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ)။
ငါအဲဒါကိုဖွင့်ကြည့်တော့ ငါ့မှာ x-huyaks ခေါင်းပေါ်တုတ်ရှိတယ်၊ ငါမမှတ်မိတော့ဘူး
p-p- ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့တာလား မဖြေဘူးလား။
အဲဒီအခါမှာ သူတို့က ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေလို့ သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။)
ကလေး၊ မင်းရဲ့ မသန်စွမ်းမှု အချိုးအစားကို ပြောပြပါ။ညစ်ပတ်သောအခွန်ထမ်းသူသည် ဤနှစ်များအတွင်း စုဆောင်းထားသော ငွေပမာဏကို ပြောပြပါ။
အမြဲတမ်း၊ chat-roulette မှာထိုင်ပြီး SNILS၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ 2NDFL လက်မှတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ကျွန်တော်နဲ့အတူ သိမ်းဆည်းထားတယ်၊ မင်းသိပါတယ်။ချက်ခြင်းပြဖို့ တောင်းဆိုလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။PS- နောက်ဆုံးတော့ Peekaboo ဟာ ပိုလီနည်းပညာ-ဝါဒဖြန့်တဲ့ မြွေပွေးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ ဒီလူရွှင်တော်အားလုံးကို တားမြစ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဗိုလ်သမီးတွေရဲ့ ချောင်းကြည့်ရာကနေ သတင်းပြန်ကြားရေးစစ်ပွဲဟာ အမှောင်ထုပါပဲ။သူသည် Zhytomyr ဒေသတွင်နေထိုင်သော်လည်း Arkhangelsk နှင့် Novy Urengoy တို့ကိုစိုးရိမ်သည်။
ဒါကြောင့် Pikabu မှာ အများကြီးရှိတယ်။
Cress သည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အလုပ်ထွက်ရန် HryvniaAristovich ပြောသည့်အတိုင်း "လိမ်ခြင်းသည် အမျိုးသားရေးအယူအဆ"
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူရဲကောင်းတွေ လုပ်နေကြတာ
ယနေ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၎င်း၏တရားဝင်ရာထူးကို ရယူခဲ့သည်။အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့ အလယ်မှာ ကျွန်တော် ထုပ်ပိုးပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ရေပန်းဥယျာဉ်သို့။
တောင်ကုန်းတွေပေါ်စီးပြီး ရေနွေးငွေ့ခန်းတွေ အမျိုးမျိုးမှာ ရေနွေးဖျောပြီး တံ ဆိပ်လို ရေကန်မျိုးစုံမှာ ကူးခတ်၊ လက်တင်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး မော်ဆစ်ကို မြုပ်လိုက်၊
ဖုန်းမရှိ၊ ဝန်ထမ်းမရှိ၊ ဖောက်သည်မရှိ၊ ဘာမှမရှိ။
နှစ်နာရီပဲပျော်တယ်။အားလပ်ရက် တစ်ပတ်ကဲ့သို့ အနားယူပါ။
- ဒီနေ့အတွက် ပေးဆောင်ရမဲ့ အရာအားလုံး ပေးဆပ်ခဲ့တယ်၊
- လုပ်စရာရှိတာ အကုန်လုပ်၊
အရာအားလုံးက လည်နေပြီး လည်နေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့ပါဝင်မှုက မလိုအပ်သေးဘူး။
ငါ့အတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ခါတလေမှာ ဒီလိုရုတ်တရက် အားလပ်ရက်လေး ရပါစေ။
တစ်ခါက အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ ဟိုတယ်ငယ်လေးတွင် အနားယူခဲ့သည်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ လူသိပ်မများပါဘူး။ငါက ရုရှားလူမျိုးပဲ။ကျွန်တော့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ပိုကောင်းလာချင်ပေမယ့် တစ်ခုခုက အဆက်မပြတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေပါတယ်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ တစ်ညနေခင်းမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရင်း ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ် - သူ လန်ဒန်ကနေ တည့်တည့်ရောက်လာတယ်။ဆယ့်ခုနစ်နှစ်သား၏ မြေးနှင့် အတူတူ။ရေငုပ်ပြီး ပင်လယ်လေကို ရှူဖို့လာကြတယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော် ဒီအဖိုးနဲ့ ထိုင်ပြီး တစ်နည်းနည်းနဲ့ စကားပြောနေတယ်၊ ​​ဘဝက ဘယ်လိုလဲ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ပြောသလို၊ အခု အင်္ဂလန်မှာ ပင်စင်လစာနဲ့ ဘာတွေလဲ၊ စသဖြင့်ပေါ့။သူက ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပြပြီး ရှင်းပြပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာမှာ နားလည်မှုလွဲနေတာကို မြင်တော့ အရာအားလုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားတယ်။ထေ့ရိပ်မကင်းဘဲ ဇွဲနှင့်။သူ့မြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောလို့ မရဘူး။ကျွန်တော့်အဖြေတစ်ခုစီတိုင်းတွင် သူသည် အနီးနားသို့ ဆွဲငင်ခံရပြီး နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ခဲကာ ထိုင်နေနိုင်သည်။နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မအဖြေတစ်ခုပြီးတဲ့အခါ သူက ရိုင်းစိုင်းစွာ ရယ်မောလိုက်တယ်။အဖိုးက ကျွန်တော့်ကို တောင်းပန်တဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်ကာ သူ့မြေးကို ခေါင်းနောက်ကို ပုတ်လိုက်တယ်။ပညာရေးတွင် ထိုကဲ့သို့ သည်းမခံနိုင်သော ချဉ်းကပ်မှုမျိုးကို မမျှော်လင့်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောခဲ့သည်၊
- ဘာလို့ ရယ်နေတာလဲ Tom။
- အင်း၊ သူက (ငါ့ကို ထောက်ပြတယ်) အင်္ဂလိပ်လို ရယ်စရာကောင်းတယ်။
- သူ့ကို ရုရှားလိုပြောပါ။
- ဘာလဲ!?ရုရှားဘာသာစကား ဘယ်လိုလဲ။ငါဘယ်လိုပြောမလဲ။ရုရှမသိဘူး အဖိုး။
- မှန်ပါတယ်၊ မင်းက လူမိုက်။
သူ့မြေးကို အခန်းထဲ လိုက်ပို့ပြီး နောက်ထပ် သေတ္တာသုံးလုံးကို ပြောပြသည်။ဒါပေမယ့် Tom က မထွက်ခင် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
Carlson ပြန်ရောက်နေပါပြီ။စီးပွားရေးမျက်နှာစာ။04/26/2022⁠ ညနေ
ငါ့အကြောင်းနဲ့ ငါ့ပို့စ်တွေတင်မကဘူး။လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သတင်းအချို့သည် ခေါင်းစီးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
1. ရုရှားနိုင်ငံရှိ ပြုပြင်မှုများနှင့် နွေရာသီအိမ်တွင်း OBI အတွက် ဟိုက်ပါမားကတ်များကွန်ရက်သည် ဧပြီလကုန်မှစ၍ စတိုးဆိုင်များ၏ လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။// နိုင်ငံရေးအနေအထားကို ညွှန်ပြထားသည်။ဒါပေမယ့် အမြတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်။
၂။ စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြိုင်တူတင်သွင်းမှုအတွက် ထုတ်ကုန်စာရင်းကို ပြင်ဆင်ထားသည်။// ထွက်ခွာသွားသူတိုင်းနီးပါးသည် မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရုရှားနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။သင်းအုပ်ဆရာ၊
3. လတ်ဗီးယား၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ မတ်လတွင် ရုရှားထံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့မှု နှစ်ဆတိုးလာခဲ့သည်။// လျှပ်ကူးပစ္စည်းရှိ အီလက်ထရွန်များ၏ စနစ်တကျ ရွေ့လျားမှုသည် ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများထက် နိုင်ငံရေးအရ လွှမ်းမိုးမှုနည်းသည်။
1. ရှီကျင့်ဖျင်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ စီးပွားရေးပြိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။// အဲဒီလူက အဲဒီလူက လုပ်လိမ့်မယ်တဲ့။သတင်းကောင်းမှာ ရှီကျင့်ဖျင်၏ အမိန့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒီအတွက် မင်း ငါတို့ပစ္စည်းတွေ အများကြီးလိုလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်၊ ဒါက ကြေငြာချက်မဟုတ်ဘူး။ရှီက - တရုတ်လုပ်မယ်။
2. ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့သည် နိုင်ငံသုံးငွေကြေးဖြင့် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြင်ဆင်ထားသည်။// ရုရှားနှင့် တရုတ်ကြားတွင် အခြေချနေထိုင်မှုများမှ ဒေါ်လာကို ဖယ်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။
3. အစိုးရသည် လမ်းများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နောက်ထပ် 120 ဘီလီယံရူဘယ်ကို ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။// ဤသည်မှာ သေချာပေါက် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
4. Finnish သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီး Stora Enso သည် ရုရှားတွင် လွှစက်များ ရောင်းချနေသည်။// အဲဒါ မင်းပိုင်တယ် - ငါတို့ပိုင်တယ်။လျှော့စျေး (ဝယ်သူ၏တိုက်ရိုက်အမြတ်) - ယူရိုသန်း 70 ထက်မနည်း။
5. ရုရှားနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များသည် တရုတ်ယူနီယံငွေပေးချေမှုစနစ်၏ ကတ်များထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်မှုအဆင့်သို့ တိုးလာလျက်ရှိသည်။// ကောင်းတယ်။
6. အိုင်တီကုမ္ပဏီများထံမှ အခွန်ငွေများသည် နှစ်စပိုင်းကတည်းက 30 ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပါသည်။// အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ဤသတင်းသည် အိုင်တီအတွက် ကမ်းလွန်စီမံကိန်းများ ပြတ်တောက်သွားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းခွန်များသည် နိုင်ငံခြားသို့ စီးဆင်းမှုမရှိတော့ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။IT အတွက် အခွန်တွေ လျော့သွားပေမယ့် ဒါက
7. Finnish အစားအစာ ထုတ်လုပ်သူ Valio သည် Viola အမှတ်တံဆိပ် အပါအဝင် ၎င်း၏ ရုရှားလုပ်ငန်းကို Velcom အဖွဲ့ထံ ရောင်းချခဲ့သည်။// အိမ်ရှိ အရာအားလုံး၊
1. Gazprom" မှ ပိုလန်သည် ဧပြီလ 26 ရက်နေ့တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
2. ပိုလန်သည် ရုရှားဓာတ်ငွေ့အတွက် ရူဘယ်ဖြင့် ပေးချေရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
3. ပိုလန်ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ PGNIG သည် ဧပြီလ 27 ရက်နေ့တွင် ထောက်ပံ့မှုများအပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Gazprom ထံမှ အကြောင်းကြားစာရရှိခဲ့သည်။
4. ပိုလန်သည် ရူဘယ်ဖြင့် ပေးချေရန် ငြင်းဆိုပြီးနောက် ရုရှားဓာတ်ငွေ့ကို လက်ခံရယူခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
// ပိုလန်ကြောင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေး ။
1. Khazin: တကယ်တော့ အနောက်နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာ ကပ်ဘေးတစ်ခုပါ။// ဒါကို ကျွန်တော် မရေးခဲ့ဘူးဆိုတာ သတိပြုပါ။
2. ဂျာမနီတွင်၊ ဗဟိုဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဒေါ်လာအရန်ငွေများကို စတင် ဝှက်ထားမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ကုန်စည်နှင့်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု။ရူနှင့်ဆီတို့သည် အစဉ်လိုက်ရှိကြသဖြင့် ရွှေအနည်းငယ်ကျသွားသည်။
သို့သော် ယဉ်ကျေးသောနိုင်ငံများ၏ "မာကျောသော၊ လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်သော" ငွေကြေးများသည် မတ်စောက်သောငုပ်လျှိုးသွားခဲ့သည်။ပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့နေရာကို နောင်တမရပါဘူး ပုံလေးတွေပြပေးပါ့မယ်။အချိန်ဇယား - သြဂုတ်လမှ ဧပြီလ
ယူရို- အနှုတ် 12%
ဗြိတိန်ပေါင်- အနှုတ် 11%
ဂျပန်ယန်း- အနှုတ် 16%
သစ်သားရူဘယ်: 0% ။အမှန်တရားက ၁၃၀+ မှာ လမ်းလျှောက်သွားတယ်။
တရုတ်ယွမ်ငွေ။တရုတ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဒေါ်လာနှင့် 6.32 မှ 6.55 ထိ ယွမ်ငွေကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။အမျိုးမျိုးသော လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် ကိုဗစ်မှ ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများကို တုံ့ပြန်မှုများအထိ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ကြသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် ယင်းသည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် တရုတ်ထုတ်ကုန်များ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်— ပို့ကုန်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် နိုင်ငံသုံးငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
စတော့အိတ်ချိန်း၊ MICEX အညွှန်းကိန်း။အောက်ခြေကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး စိတ်ချလက်ချ ခုန်တက်လာပြီး စင်္ကြံလမ်း 2250 - 2750 သို့ ပြန်သွားပါ။ အဲဒီမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အနှစ်ချုပ်: ထွက်ခွာသွားသူများသည် ယဉ်ကျေးသောပုံစံဖြင့် ထွက်ခွာသွားမည့် လက္ခဏာများ ပိုများလာနေပြီး အများစုမှာ လုံးဝထွက်ခွာသွားမည်မဟုတ်ပေ။ဘေးဥပဒ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဖြစ်မလာဘူး။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူမဟုတ်သူများအတွက် အကြံပြုချက်များ -ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေသားငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းထားကာ အပ်ငွေတစ်ခုသို့ အခမဲ့ရူဘယ်ထည့်ပါ သို့မဟုတ် သုံးစွဲပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မက်ဆေ့ချ်-အောက်ပါသော့ချက်စာလုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများကို မထည့်သွင်းပါနှင့်။
2. သင်လိုအပ်သလောက် ငွေသားသွားဝယ်ပါ (မလိုအပ်ပါ)။
3. စျေးနှုန်းများနှစ်ဆတိုးလာပါပြီ၊ ဒိန်ချဉ် 60 ရူဘယ်ဖြစ်လာပါပြီ။- အကျပ်အတည်း၏အထွတ်အထိပ်မှအချိန်နောက်ကျကျန်နေချိန်အထိစားသုံးသူစျေးနှုန်းများကိုဆွေးနွေးရန်အချက်မရှိပါ။ဇွန်လတွင် စားသုံးသူစျေးနှုန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးပါမည်။
4. AlexRadio သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မည်သို့မျှ အဆင်ပြေကြောင်း ရေးသားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်အတော်ကြာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ထားသင့်သည်- မဟုတ်ပါ၊ AlexRadio သည် ဤကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ပမာဏဖြင့် ရှိသင့်သည်ထက် များစွာသာလွန်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တားစီးတာလဲ။
ယူကရိန်းရုပ်သံ⁠ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သည့် ဟက်ကာများထံ အယူခံဝင်ပါ။
ယောက်ျားလေးတို့၊ မင်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာ ငါမသိဘူး၊ ဒါကြောင့် ငါဒီမှာရေးနေတာ၊ တစ်ယောက်ယောက်က မင်းဆီကို ဒီစာပို့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ယူကရိန်းရုပ်မြင်သံကြားကို သင် hack နိုင်တာကကောင်းတယ်။hacking က မကောင်းတဲ့အတွက် မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်၊ အရမ်းမိုက်တယ်၊ မင်းရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာအဆင့်ကြောင့် ပေးသင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုင်းထဲမှာ သင်လွှင့်တင်ထားတဲ့ စာတွေက ဘာကြောင့် ဒီလောက် သိမ်ဖျင်းရတာလဲ။Zelensky သည် ရုရှားသို့ဝင်ရောက်ရန် ဆန္ဒခံယူပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Zelensky ထံလက်နက်ချသည် - ဤသတင်းသည် အခြားသောဟက်ကာများ၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန် သင်သည် Captain ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ထိုသို့သောသတင်းများသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊ အများစုမှာ တစ်ဖက်တွင် အပြုံးနှင့် တစ်ဖက်ကို ယားယံစေမည်ဖြစ်သည်။ယူကရိန်းပရိသတ်အပေါ် အမှန်တကယ် သက်ရောက်မှုရှိလိုပါက၊ စစ်မှန်သောသတင်းကို အသုံးပြုပါ- ရုရှားဘက်မှ ထုတ်ပြန်သော ယူကရိန်းတပ်မတော်ဘက်မှ ဆုံးရှုံးမှုအရေအတွက်၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အခြေချနေထိုင်သူများစာရင်း၊ ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ အရပ်ဘက်အရာဝတ္ထုများကို တိုက်ခိုက်နေကြသည့် LDNR နှင့် ရှုံးနိမ့်မှုကို ကြီးထွားစေနိုင်သည့် အခြားသော ပဲ့တင်ထပ်သော သတင်းများ၊
PS: အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မပါဘဲ ပို့စ်တင်ပါ။
အီတလီတွင် ယူကရိန်းဒုက္ခသည်များ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကို "နာဇီများ!"
ယူကရိန်း အထူးစစ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် အကြောင်းရင်းကို ကောင်းစွာနားလည်သော ဥရောပသားဦးရေသည် ဆက်လက်တိုးများလာသည်။ယင်းအတွက် အကြောင်းရင်းများမှာ Azov အမျိုးသားတပ်ရင်း၏ swastika ဖြင့် ဥရောပမြို့များတဝိုက် သွားလာရန် တွန့်ဆုတ်မနေဘဲ ယူကရိန်းမှ နတ်ဆိုးဒုက္ခသည်များဖြစ်သည်။
"ဘာလဲ? ဘယ်မှာလဲ။ ဘယ်အချိန်?" ဂိမ်းတစ်ခုရှိသည်။Voroshilov-
- ပြည်နယ်လုံခြုံရေးအရာရှိ Shcherbakov သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကစားနေသည်။အာရုံစူးစိုက်မှု ဟူသော မေးခွန်းမှာ “၄၇ခုမြောက် အရာဝတ္တု၌ အဘယ်အရာ ရှိသနည်း။
ဆွေးနွေးမှု တစ်မိနစ် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ပညာရှင်များမှာ အကြံဥာဏ်များ မရှိပါ။သူတို့က အချိန်ပိုယူကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ Alexander Druz က မဆိုင်းမတွ ဖြေပါတယ်။
“အဲဒီမှာ ဘာရှိလဲ မသိဘူး။
- အဖြေမှန်ပါတယ်။အထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ သိစရာမလိုပါဘူး။
တခါတရံမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို နားထောင်ပြီး သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကလေးဘဝ ရှိခဲ့ဖူးကြောင်း နားလည်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။အလုပ်တွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသည် သာမန်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်တူသည်၊ အဖွဲ့သည် အမျိုးသားအများစုဖြစ်ပြီး စကားဝိုင်း၏အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးသမီးများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ကားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ဒါပေမယ့် သူဘယ်တုန်းကမှ မဆွေးနွေးဘူး။မကြာသေးမီကမှ ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသားချင်းစကားပြောခဲ့ကြသည်မှာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သင်မသိပါ။ထို့အပြင် Andrei ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကဆိုသည်။ကလေးဘဝက တစ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးတယ်။အမေသည် မော်စကိုတွင် အလုပ်လာလုပ်ကာ အဆောင်တစ်ခုတွင် အခြေချကာ သူမ၏အစ်မကို ပွေ့ဖက်ထားသည်။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး သူ့နေရာကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတယ်၊ ကျွန်မမွေးတယ်။ဖေဖေ၊ ငါ့ဘဝရဲ့ တတိယလမှာ ကလေးက ငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်သွားလုပ်၊ ထွက်သွားပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။အမေက ဘော်ဒါဆောင်ကို ပြန်သွားတော့ တိုက်ခန်းတစ်ခုအတွက် ငွေရှာတယ်။ကျွန်မ ၈ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက ညီမလေး ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားတယ်။အမေက လေဖြတ်ပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော်က တစ်ဦးတည်းသော အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ထို့နောက် စက်ရုံရှိ ထမင်းစားခန်းတွင် ထမင်းချက်လုပ်ခဲ့သည်။စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးက အစည်းအဝေးတက်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမှာ အခန်းကို ထားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ သူမကိုကူညီဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူခဲ့တယ်။ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့6နှစ်တာကာလဟာ မနက်3နာရီထပြီး စင်္ကြံသန့်ရှင်းရေး၊ ရုံးခန်းတွေ၊ နှင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ကျောင်းသွား၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ စာသင်ချိန်တွေမှာ အိပ်စက်တဲ့နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတယ်။နွေရာသီ ၊ အားလပ်ရက်တွေမှာ ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ် ၊ သူတို့ ခေါ်သွားတဲ့နေရာ ၊ ဝန်ဆောင် ၊၉ တန်းအောင်ပြီးလို့ နည်းပညာကျောင်းတက်တော့ စစ်တပ်က မတောက်တခေါက်ဘဲ မိသားစုမှာ ဝမ်းစာရှာတဲ့ အမေက မသန်စွမ်း။တစ်နည်းနည်းနဲ့ သူမ ပုံမှန်ဘ၀ကို ပြန်စလာပြီး အသက် 16 နှစ်မှာ ပထမလစာကနေ ချောကလက်4ကီလိုဂရမ်နဲ့ ရေခဲမုန့်နှစ်ခွက် ဝယ်တဲ့နေ့ကို သတိရတယ်။ငါတို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ထို့ကြောင့်၊ မင်းဘဝနဲ့ ကလေးဘဝက ပုံပြင်တွေကို မျှဝေတဲ့အခါ- အဖေက ငါ့ကို ဘီးနောက်မှာ ထားခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ငါ့အမေက လှပတဲ့အမှိုက်ပုံးကားကြီးတစ်စီး ဝယ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့အဖွားက တိုက်ခန်းကထွက်သွားတယ်၊ မိသားစုတစ်စုလုံး ပင်လယ်ထဲသွားကြတယ်၊ ငါပြောစရာမရှိဘူး၊ ငါက ခေါင်းမာတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် introvert တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။
Video chat Roulette - သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာရာတွင် အွန်လိုင်းလက်ထောက်
ဆက်သွယ်မှုဖွင့်ထားသူများ အားလုံးအာရုံစိုက်ပါ။သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စကားဝိုင်းတွေ၊ သဘောထားတူတဲ့သူတွေကို ရှာနေလား။မင်းရဲ့အချစ်ကိုတွေ့ချင်လား ဒါမှမဟုတ် မင်းနဲ့ တွဲချင်လား။သင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အထူးပြုအင်တာနက်အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုပါ - Chatroulette။ရိုးရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဤဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးစုများသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ သန်းပေါင်းများစွာသောလူများလည်း အသုံးပြုပါသည်။သင်ကဲ့သို့ပင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ ဥရောပနှင့် အမေရိက၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ချိန်းတွေ့လိုသူများသည် အာရုံစိုက်ခံရထိုက်သူများကို ရှာဖွေရန် ဗီဒီယိုချတ်ကို အသုံးပြုပါ။
မင်းမှာ တစ်မိနစ် အခမဲ့ ရှိတယ်။မဖြုန်းတီးပါနှင့်။ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားပြောခန်းသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။အနာဂတ်တွင် အွန်လိုင်းမုဒ်မှ လက်တွေ့ဘဝသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အစည်းအဝေးများနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အချိန်ဖြုန်းပါ။မိန်းကလေးများနှင့် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်းသည် လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးပြီးသားဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆိုက်ပြင်ပတွင် အသိမိတ်ဆွေများ ဆက်လက်ရှိနေစေရန် အချင်းချင်း အဆက်အသွယ် အချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူများကို မည်သည့်အရာကမှ တားဆီးထားခြင်းမရှိပါ။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကို နှစ်လမ်းသွားရှာဖွေမှုတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်။ဗီဒီယိုရုပ်ပုံတစ်ပုံနှင့် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ပျူတာတွင် စပီကာများ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားရပါမည်။
အမည်မသိပါဝင်သူများအတွက် ဗီဒီယိုချတ်ကို ရနိုင်သည်- သင်သည် ဆိုက်ပေါ်တွင် စာရင်းသွင်းပြီး သင်၏အမည်ရင်းကို ဖော်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။ပါဝင်သူအချို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်း အတိုချုံးတင်ပြမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့် ယင်းက ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်တွင် ရှိနေစေရန် ကူညီပေးသည်။ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဆက်သွယ်ရေး၏ထိရောက်မှုကို တိုးစေသော်လည်း မလိုအပ်ပါ။
ရှာဖွေမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် "အဖော်ရှာဖွေမှု စတင်ရန်" ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ထို့နောက်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အသိမိတ်ဆွေအသစ်များ၏ မျက်နှာများသည် ချက်တင်ဝင်းဒိုးတွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။သင်နှစ်သက်သောမည်သူနှင့်မဆို စကားစမြည်ပြောရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။"Next" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် မနှစ်မြို့ဖွယ်လူများကို ကျော်သွားခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
Chatroulette သည် သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေရာတွင် နှစ်လမ်းသွား လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်ကို သတိရသင့်သည်။ဆိုလိုတာက စခရင်ကနေ ကြည့်တဲ့လူတွေက သင့်ကို အကဲဖြတ်ပြီး သူတို့နဲ့ စကားပြောဖို့ သင့်တော်တဲ့သူလား မဆုံးဖြတ်ဘူးလား။ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ထံမှ နောက်အသုံးပြုသူထံသို့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းရွှေ့လာပါက မအံ့သြပါနှင့်။ဤဂိမ်းသည် ဂိမ်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် လူပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ပါဝင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် သင်နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့မည့်သူများ သေချာပေါက် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးများနှင့် Chatroulette သည် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို ရှာဖွေခြင်းအတွက် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆက်သွယ်မှုပုံစံသည် ရှက်တတ်ပြီး စကားမပြောတတ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။အမှန်တော့၊ လူတိုင်းသည် သူစိမ်းများနှင့် စကားစမြည်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ သဘာဝကျကျ စတင်နိုင်ပြီး ဆွေးနွေးမှုကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။စကားဝိုင်းသည် ဝေးကွာနေပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် စကားစမြည်ကို အချိန်မရွေး အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက စိတ်တည်ငြိမ်စေပြီး ယုံကြည်မှုကို ပေးသည်။
ပျော့ပျောင်းသောလူငယ်များအတွက်၊ မိန်းကလေးများနှင့် စကားပြောကစားခြင်းသည် ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ အမျိုးသမီးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လွတ်လပ်စွာခံစားသင်ယူရန်နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကို စတင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးများနှင့် ဗီဒီယိုစကားပြောခြင်းသည် ယောက်ျားလေးများကို ချိန်းတွေ့ခြင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ယောက်ျားလေးများကို ယုံကြည်မှုဖြစ်စေသည်။၎င်းသည် လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွားစေသည်။ဗီဒီယိုချတ်တွင်၊ ၎င်းသည် ဘဝတွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်- မိန်းကလေးတစ်ဦးကို နှစ်သက်စေရန်အတွက် သင်သည် သပ်ရပ်သော၊ ဖော်ရွေသော၊ ယဉ်ကျေးစွာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုပြသရန်နှင့် ချီးမွမ်းရန် လိုအပ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သင်မည်မျှပင်ကောင်းနေပါစေ မိန်းမတိုင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ဒါ​ပေမယ့်​ မင်းအကုန်​လိုအပ်​​နေလား?
အစပြုပါ။သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် chatroulette ကိုသုံးပါ - မှန်ကန်သောလူကိုသင်သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။
ကော်ဖီသောက်ပြီး မိတ္တူကိုဖွင့်ခိုင်းမယ့်သူ မရှိဘူး၊ နေ့လယ်စာစားဖို့ မခေါ်တော့ဘဲ မင်းရဲ့ ကျက်သရေရှိမှုကို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်သင်တွေကလည်း ထပ်တူမကျတော့ဘူး။ဖော်မတ်အသစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်အရာပေးသနည်း၊ မော်နီတာမှတစ်ဆင့် အထင်ကြီးအောင်ပြုလုပ်နည်းနှင့် အွန်လိုင်းတွင် Zoomer များအတွက် အမှန်တကယ်လွယ်ကူပါသလား။N+1၏ အယ်ဒီတာများ သည်"Russia -aLand of Opportunities" ပလပ်ဖောင်းနှင့် အတူ စိတ်ပညာရှင်နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက ဝေးလံခေါင်သီသော အလုပ်ခေတ်တွင် အလုပ်သင်များသည် ခေါင်းစဉ်ကို နားလည်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Zoom ဖြင့် မာဖီးယား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်သည် ယခုနှစ်နွေဦးတွင် အလုပ်သင်များရှာဖွေရန် ခက်ခဲစေသည်- ANCOR စစ်တမ်းတစ်ခုအရ အလုပ်သင်ကမ်းလှမ်းသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဝေစုသည် 2022 ခုနှစ်တွင် 66 ရာခိုင်နှုန်းမှ 2022 ခုနှစ်တွင် 50 ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားသည်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် အလုပ်သင်ဘတ်ဂျက်များကို လျှော့ချခိုင်းခဲ့သည်- စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော အလုပ်ရှင် (၂၄၀ ဦးအနက်မှ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည် ကူးစက်ရောဂါကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သင်များကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။အခြားသူများ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် သတိဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဖော်မတ်အသစ်သို့ လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်၊ Sberbank သည် ဖော်ရွေသောရုံးခန်း၏အငွေ့အသက်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ရိုးရာနှစ်လကြာ Sberseason အလုပ်သင်ကို အွန်လိုင်းတွင် ရွှေ့ရန်တာဝန်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန်၊ အလုပ်သင်များအတွက် နောက်ထပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အစီအစဉ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။
“ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ ကျောင်းသားတစ်ဦးစီကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖုန်းခေါ်ပြီး သူတို့အားလုံး အဆင်ပြေရဲ့လား၊ အကူအညီလိုသလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ဖော်ရွေတဲ့ပုံစံနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့များတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် zoom ကော်ဖီသောက်ခြင်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်သင်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကို စိတ်လှုပ်ရှားစေမည့် စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် အရာအားလုံးကို စကားစမြည်ပြောရင်း ဆွေးနွေးကြသည်၊” ဟု Sberbank တွင် vc.ru မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုများအစား Zoom တွင် အင်တာဗျူးများ (ထိုနည်းအားဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများအပြား တက်ရောက်ကြပြီး နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ)။ဥပမာအားဖြင့်၊ ATON သည် ကျောင်းသားများအတွက် အထွေထွေအလုပ်သင် “ATON opens doors” ကို စီစဉ်သောအခါတွင် လျှောက်လွှာအရေအတွက် စံချိန်တင်ရရှိခဲ့သည်- webinar တစ်ခုစီကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူ 500 ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ဤအစီအစဉ်ပြီးနောက်, သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး, အကောင်းဆုံးအလုပ်သင်တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အထွေထွေချတ်များ၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များ၊ တာဝန်များ၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းကျူရှင်ဆရာများသည် အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စံနမူနာများဖြစ်သည်မှာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် အွန်လိုင်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် တုန်လှုပ်စရာမဟုတ်ပါ။အွန်လိုင်းဖော်မတ်သည် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီအတွက် အချိန်ပေးနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်၊ လျှောက်ထားသူတိုင်းနှင့် တိုတောင်းသော ရင်းနှီးသူများ (ဤပုံစံဖြင့်၊ မိမိကိုယ်ကို သက်သေပြရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်)၊ လက်တွေ့တွင် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသော အကောင်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း အွန်လိုင်း စကားဝိုင်းများ နှင့် အစားထိုးပါသည်။အွန်လိုင်းဖော်မတ်သည် သင့်အား ချက်ချင်း "ပိုလျှံနေသောအရာများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန်" နှင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်- ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုအား မသေချာသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်များ နှစ်ဦးစလုံး။
"ကျွန်ုပ်တို့သည် Russia - Land of Opportunity platform မှ အကောင်အထည်ဖော်သော Internships 2.0 ပရောဂျက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်ကို ဒုတိယနှစ်အထိ လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်" ဟု အိမ်ရာနှင့် အသုံးအဆောင်များဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များဌာန အကြီးအကဲ Olga Grishina က ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး။— ဤကာလအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်ရာနှင့် အများပိုင်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အကြောင်းအရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုကိုးခုကို ပြုစုထားပါသည်။ကျောင်းသားများနှင့် ဘွဲ့ရများသည် ပုံစံတူအခြေအနေများအတွက် အဖြေများကို ပေးဆောင်သည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်သင်များအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကို ရေးသားသူများကို ယူဆောင်ပါသည်။"
Internships 2.0 သည် ကျောင်းသားများအား ရုရှားရှိ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုတွင် အလုပ်သင်ရရန် ကူညီပေးသော ရုရှား-Land of Opportunity ပလပ်ဖောင်း၏ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?အလုပ်ရှင်သည် ပရောဂျက်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လက်တွေ့ဆန်သော အလုပ်များ (ကိစ္စများ) ကို နေရာချပေးသည်။အဲဒီအခါ ကျောင်းသားက ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းတယ်။ရလဒ်သည် ဝေါဟာရစာတမ်း သို့မဟုတ် စာတမ်းတစ်ခုအတွက် အခြေခံဖြစ်လာနိုင်သည်။ကုမ္ပဏီများသည် ရလဒ်အဖြေများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အကဲဖြတ်သည်။ကံထူးရှင်များကို လေ့ကျင့်ရန် သို့မဟုတ် အလုပ်သင် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ပရောဂျက်၏ တစ်နှစ်တွင် ရာသီနှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီတွင် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ရလဒ်များကို စုစည်းထားသည်။
အိမ်ရာနှင့် အများသူငှာ အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အမှုတစ်ခုစီတွင် အလုပ်သင်များအား လက်ရှိအိမ်ရာနှင့် အများသူငှာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်တွင် တတ်နိုင်သမျှ နှစ်မြှုပ်စေသည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြုစုခဲ့သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောင်းသားများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်သက်သာသော ပြုပြင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အဝေးမှတွက်ချက်သည်။
"ဟုတ်ပါတယ်၊ အလုပ်သင်များသည် စက်ရုံတွင်ရှိနေခြင်းနှင့်၎င်း၏လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သင့်သည့်နယ်ပယ်များရှိသည်၊ ဥပမာ၊ ၎င်းသည် ချို့ယွင်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန် တိုက်ခန်းအဆောက်အဦစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်" ဟု Grishina မှပြောကြားခဲ့သည်။“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ WorldSkills ချန်ပီယံဆု (ရုရှားနိုင်ငံ – Land of Opportunity platform ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်) အလုပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို အဆိုပြုခဲ့သည်- အိမ်သုံးအိမ်တစ်အိမ်၏ စစ်တမ်းတစ်ခု- နှစ်နာရီကြာ ပါဝင်သူများသည် အွန်လိုင်းမှ အရာဝတ္တုကို လေ့လာခဲ့ကြပြီး ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်—အမှန်တကယ်၊ အဆောက်အဦပုံစံကို နမူနာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။”
Chuvash Republic ၏ တက္ကသိုလ်များ၊ Krasnodar Territory, Ivanovo နှင့် Vologda Regions များမှ ကျောင်းသားများသည် Housing and Communal Services Fund တွင် အဝေးမှ အလုပ်သင်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အွန်လိုင်းအလုပ်သင်များသည် ဒေသများမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။အလုပ်ရှင်တော်တော်များများက သူတို့ကို ပိုကြိုက်တယ်။VSK Insurance House ၏ အထူးပရောဂျက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာန အကြီးအကဲ Ekaterina Konopleva က ရှင်းပြချက်အရ ထိုကဲ့သို့သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် အလုပ်တွင် စိတ်အားထက်သန်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားလေ့ရှိသည်။
“ကျွန်တော်တို့အတွက်၊ ဒါက မော်စကိုကထက် ဒေသတွင်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ရှာဖွေဖို့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့ငယ်လေးများမှ ကြယ်ပွင့်များကို ရှာဖွေနေပြီး ၎င်းတို့အား မော်စကိုအသင်းတွင်ပါဝင်ရန်၊ ၎င်းတို့ကို သက်သေပြပြီး VSK နှင့် ဆက်နေရန် အခွင့်အရေးပေးသည်" ဟု Konopleva က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် "Professional Internships 2.0" ပရောဂျက်ကြောင့် Tyumen၊ Angelina Chemurtan မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေဆိုးမြောင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၏ နည်းပညာပြင်းထန်လာမှုဆိုင်ရာ အဝေးထိန်းအလုပ်သင်သင်တန်းကို တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်ကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါက ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် ထပ်လောင်းသန့်စင်မှုမရှိဘဲ ပိုက်မှရေကို သောက်သုံးနိုင်လိမ့်မည်" ဟု Angelina Chemurtan မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့မဟုတ် ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေတွင် Olympiad "I am professional" ဆုတံဆိပ်ဆုရှင် ဗလာဒီမာမှရှေ့နေ Danila Avdeev သည် စိန့်ပီတာစဘတ်အစိုးရတွင် အလုပ်သင်ဆင်းခဲ့သည် - အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖန်တီးရန်။
“ငါသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်” သည် အထူးပြုကျောင်းသားများအတွက် ဖော်မတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော ကြီးမားသော ပညာရေးအိုလံပစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပါဝင်သူများအား အလုပ်တာဝန်များကို ရုရှားနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံတွင်း အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများမှ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေသည့် စိတ္တဇ အစစ်အမှန်မဟုတ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိပညာ၊အကောင်းဆုံးပါဝင်သူများသည် ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် အာဏာပိုင်များတွင် အလုပ်သင်များ အခွင့်အလမ်းကို ရရှိကြသည်။ဘွဲ့၊ ပါရဂူနှင့် မာစတာကျောင်းသားများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
"အွန်လိုင်းဖော်မတ်ကြောင့် စိန့်ပီတာစဘတ်ရဲ့ အရပ်ဘက်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေနဲ့ သိကျွမ်းရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ၊ အချိန်ပြည့် အလုပ်သင်အတွက် အိမ်ကနေ ကီလိုမီတာ တစ်ထောင် ခရီးထွက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျောင်းတက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတုန်းမို့ ရွှေ့ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် တကယ်တော့ ဒီကိစ္စမှာ ကပ်ရောဂါက ကျွန်တော့်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်” ဟု Avdeev မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ပြီးသွားတော့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေမယ်။
အွန်လိုင်းဖော်မတ်သည် Trello နှင့် Google Meet ကိုအသုံးပြု၍ အဝေးမှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်အတွက် ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်- ကပ်ရောဂါသည် မကြာမီ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါစွမ်းရည်များသည် သိသိသာသာ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ Avdeev ၏အဆိုအရ၊ အွန်လိုင်းအလုပ်သင်သည် အလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုပါဝင်သည်။
“အဖွဲ့အစည်းများစွာတွင် အလုပ်သင်သည် ကော်ဖီစက်နှင့် မိတ္တူကူးစက်ဖြင့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်- စာရေးခြင်း၊ ပရင့်ထုတ်ခြင်း၊ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ဤ “ရုံးဂိမ်းများ” အားလုံးကို နောက်ခံတွင် ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ၊ လုပ်ဆောင်စရာများသည် ပိုမိုတိကျလာသည်။ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပိုမိုဖန်တီးမှုရှိသော အလုပ်များကို အွန်လိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်- အစိုးရအေဂျင်စီများတွင် ရာထူးများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်မုဆိုးများ၏ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအတွက် Telegram တွင် chat bot တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်၊” ဟု Danila က အလုပ်သင်ကို ပြန်ပြောပြသည်။
Intern Bridge ၏ သုတေသနပြုချက်အရ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခုနစ်နှစ်ခန့်က အလုပ်ရှင်များသည် ရိုးရှင်းပြီး ရုံးအလုပ်တွင် လက်ထောက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အလုပ်ရှင်များကို အဓိကအားဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့သည်။ယခုအခါ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အနာဂတ် အရည်အချင်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။
“ConsultantPlus စနစ်နဲ့ သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ထုတ်ကုန်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရတာကို သဘောကျတယ်။ဒါက ကျွန်တော် စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ စိတ်ဝင်စားတာပါ” ဟု RANEPA မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် Internship တွင်ပါဝင်သူ Anton Filatov က ပြောကြားခဲ့သည်။
အလုပ်သင်များ၏ တာဝန်များတွင် ပရောဂျက်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းများနှင့် အစည်းအဝေးများကို ချိန်းဆိုထားသည့်အချိန်တွင် တက်ရောက်ခြင်းနှင့်အတူ တစ်ဦးချင်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်စေခြင်း ပါဝင်သည်။သင်တန်းများနှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ထို့နောက် အဖွဲ့အတွင်း ပါဝင်သူများသည် ပရောဂျက်ကို ဆွေးနွေးကြပြီး တစ်ဦးချင်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။
“အချိန်ဇယားက တင်းကျပ်တယ်။အတန်းချိန်ကို ၁၀း၀၀ မှ ၁၄း၀၀ ထိ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ကျွန်တော် ငြိမ်နေခဲ့ရသည်။ဒါပေမယ့် အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်” ဟု Filatov ကပြောကြားခဲ့သည်။
အဝေးမှအလုပ်လုပ်ပြီး အလုပ်သင်များသည် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ရုံးနေ့လည်စာများအတွက် ငွေကုန်သက်သာစေပြီး အလုပ်မဟုတ်သောဆက်သွယ်ရေးတွင် သုံးစွဲလေ့ရှိသည် (ကော်ဖီသောက်နေစဉ် တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်အတွင်း အထွေထွေဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ရှောင်လွှဲခြင်း)။ဤပုံစံသည် တိကျသောအလုပ်များကို အာရုံစိုက်ခွင့်ပြုသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် သင်တန်းသား/ဝန်ထမ်းများ၏ အထီးကျန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် အထီးကျန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ပြီးတော့ အထီးကျန်မှုက လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို သေစေတယ်။
ဤသည်မှာ အမေရိကန် စာရေးဆရာနှင့် သုတေသီ Dan Schawbel မှ သူ၏ အရောင်းရဆုံးလူသို့ ပြန်ရောက်ခြင်း- အထီးကျန်ခေတ်တွင် မည်ကဲ့သို့ ကြီးမြတ်သော ခေါင်းဆောင်များ ချိတ်ဆက်မှု ဖန်တီးပုံ နိဂုံးချုပ်သည်။
Shavbel သည် Facebook၊ Google၊ Uber၊ Nike နှင့် Walmart ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများမှ ထိပ်တန်းလူငယ်ခေါင်းဆောင် 100 ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအသွားအလာတွင် အွန်လိုင်းပုံစံနှင့် နည်းပညာအပေါ် ၎င်းတို့၏ သဘောထားများကို မေးမြန်းခဲ့သည်။Schwbel ၏ကုမ္ပဏီ Future Workplace သည် နိုင်ငံ 10 နိုင်ငံရှိ မန်နေဂျာများနှင့် ၀န်ထမ်း 2,000 ကျော်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူရန် Virgin Pulse နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အလုပ်မှာ တကယ် အထီးကျန်နေတာ ဘယ်သူလဲ။လေ့လာမှုအရ အချို့သောအဖွဲ့များသည် အခြားအဖွဲ့များထက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း လေ့လာမှုက ဖော်ပြသည်။ဥပမာ:
အမျိုးသားများ (၅၇ ရာခိုင်နှုန်း) သည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်တွင် အထီးကျန်ခံစားရမှု (၄၃ ရာခိုင်နှုန်း)၊
Introverts (63 ရာခိုင်နှုန်း) သည် extroverts (37 ရာခိုင်နှုန်း) ထက် အလုပ်တွင် အထီးကျန်ဆန်သည်။
Gen Z (45 ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Millennials (47 ရာခိုင်နှုန်း) တို့သည် Gen X (36 ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Baby Boomers (29 ရာခိုင်နှုန်း) တို့ထက် အလုပ်တွင် အထီးကျန်မှုကို ပိုခံစားရသည်။
စိတ်ပညာရှင် Olga Batueva ၏ အဆိုအရ Zoomer များ၏ မျိုးဆက် (Generation Z - 2022 နှင့် 2022 အကြားမွေးဖွားသူများ) သည် အွန်လိုင်းဖော်မတ်သို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း ဘုံယုံကြည်ချက်တစ်ခု ရှိပါသည်။သို့သော်လည်း ဤမုဒ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ၎င်းတို့အတွက် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အသုံးဝင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
အာရဗီဘာသာဖြင့် "chatroulette" ၏ဘာသာပြန်
Omegle၊ Ometv နှင့် chatrouletteဆိုက်များသည် သင်တစ်ဦးချင်းစကားပြောဆိုနိုင်သည့် သူစိမ်းတစ်ဦးနှင့် တွဲနိုင်စေမည့် အကောင်းဆုံး ကျပန်းစကားပြောဆိုက်များထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။
Omegle၊ Ometv နှင့်Chat Rouletteဆိုက်များသည် သင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စကားပြောဆိုနိုင်သည့် သူစိမ်းတစ်ဦးနှင့် တွဲနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် အကောင်းဆုံး ချတ်ကျပန်းဆိုက်များထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။
ကျပန်းစကားပြောကစားတဲ့စသည်တို့ နဲ့ ချက်တင်ပါ။UK မှာရှိတဲ့ ဘယ်နေရာမဆို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနဲ့ ဆဲလ်ဖုန်းတွေနဲ့ အချိန်မရွေး အပြင်ကို အလွယ်တကူ မထွက်နိုင်ပါဘူး။
ကျပန်းစကားပြောကစားတဲ့စသည်တို့နဲ့ ချတ်လုပ်ပါ။UK မှာရှိတဲ့ ဘယ်နေရာမဆို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေနဲ့ အချိန်မရွေး အပြင်ကို အလွယ်တကူ သွားလာလို့ မရပါဘူး။
ဤကဏ္ဍကို နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ လှပသောမိန်းကလေးများချတ်ကစားတဲ့ကျပန်းချက်တင်စာမျက်နှာသည် သင့်အတွက် ကင်မရာကို စတင်ဖွင့်ပေးပါမည်။
ဤကဏ္ဍကို နှိပ်လိုက်သောအခါ၊Chat Rouletteကျပန်း ချတ်စာမျက်နှာ၏ လှပသော မိန်းကလေးများသည် သင့်အတွက် ကင်မရာကို စတင်ဖွင့်ပေးပါမည်။
ဥပမာများသည် အကြောင်းအရာမျိုးစုံတွင် ရှာဖွေထားသော စကားလုံးများနှင့် အသုံးအနှုန်းများကို ဘာသာပြန်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပမာများကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံခြင်းမပြုပါ၊ ၎င်းတို့တွင် မသင့်လျော်သော စကားလုံးများ သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်ဟု သင်ထင်သည့် ဥပမာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် စကားအသုံးအနှုန်းများသော ဘာသာပြန်များကို များသောအားဖြင့် အနီရောင် သို့မဟုတ် လိမ္မော်ရောင်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။
ငါ့ 2022 ကို ပြန်ပေးပါ။Chatroulette က ဘယ်လိုပြောင်းသွားပြီး အခုအဲဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်က သင်သည် ဘယ်သူ့ကိုမဆို လက်ညိုးထိုးပြပြီး “အိုး၊ ငါ မင်းကို ချက်တင်ကစားတဲ့ နေရာမှာ တွေ့ခဲ့တယ်!” လို့ ပြောနိုင်ပြီး၊ နောက်တော့ မင်းဟာသဟုတ်မဟုတ် နားလည်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ စိတ်ရှုပ်နေသူရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ကြည့်ပါ။ထိုအချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးသည် ဤဗီဒီယိုချတ်အကြောင်း သိပုံရသည်။မိုဘိုင်းမက်ဆေ့ချ်များ မတည်ရှိသေးပါ၊ လူမှုကွန်ရက်များသည် ၎င်းတို့၏ နို့စို့အရွယ်တွင် ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ သူစိမ်းများနှင့် ညစဉ်ညတိုင်း စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှု မရှိခြင်းကို ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ နဲ့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ ကြည့်ဖို့ နှစ်အတော်ကြာပြီးနောက် chatroulette.com ကိုပြန်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အပြောင်းအလဲများသည် "တံခါးခုံမှ" စတင်ခဲ့သည် - ချတ်၏ဒီဇိုင်းသည် လုံးဝကွဲပြားသွားပါသည်။နာမည်ကြီး "next" ခလုတ်မရှိတော့ပါ၊ ၎င်းကို တူညီသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည့် "skip" ဖြင့် အစားထိုးထားသည်။"ကစားတဲ့" - တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသော အမျိုးသားများရဲ့ အဓိကဆွဲဆောင်မှုကို ကြည့်ချင်သလား ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။သို့သော် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်၊ တိုက်ရိုက်မေးခွန်းကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး၊ သင်ဆိုက်ကို အဘယ်ကြောင့်သွားသည်ကို ရွေးချယ်ရန် ကမ်းလှမ်းသည်- ချတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းညှိမှုမရှိသော အင်တာနက်၏ချောက်ထဲသို့ ခုန်ဆင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ထွက်လာတာနဲ့အမျှ ဘာမှမထိခိုက်ပါဘူး။
ချက်တင်မှာတွေ့တဲ့ ပထမဆုံး စကားဝိုင်းက “အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဆွေးနွေးဖို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါ (အကြောင်းအရာတိုင်းနီးပါး ဆွေးနွေးရန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ထားရှိပါ )” ၊ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ပြသပြီး ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဖြင့် သူ၏ ပြင်ပလိင်အင်္ဂါကို အရူးအမူး ဆွဲထုတ်လိုက်သကဲ့သို့ပင်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အပြင် မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုလည်း ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့် ၎င်းကို ကျော်သွားခဲ့သည်။တိုတိုပြောရရင် နှစ်တွေကြာသွားပေမယ့် ဘာမှ မပြောင်းလဲပါဘူး။
Chatroulette သည် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သောအခါ Mashable ဝဘ်ဆိုဒ်သည် chatroulette အသုံးပြုသူများ၏ 14% သည် webcam ရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်ဟု ကောက်ချက်ချသည့် လေ့လာမှုများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။သုံးပုံတစ်ပုံတိုင်းနီးပါး သူတို့အထဲက အများကြီးရှိနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ငါတို့က အမြဲကံကောင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် လေ့လာမှုတွေက သိပ်မမှန်ဘူး။
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများသည် ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ညည်းညူကြသည်- ကျွန်ုပ်၏ကျပန်းစကားပြောဆိုသူ၏အာမခံချက်အရ၊ ကျွန်ုပ်သည် သူမအား မလိုအပ်ဘဲ ဘာမှမပြဘဲ တစ်နာရီအတွင်း အတုမရှိ လိင်ဆက်ဆံရန် မကြိုးစားဘဲ လုံလောက်သောသူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်သည်။မူရင်းမေးခွန်းများပြီးနောက် “နေကောင်းလား”နှင့် "မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ"၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော စကားဝိုင်းသည် လျင်မြန်စွာ ခန်းခြောက်သွားသည်။မပြောလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဆက်သွယ်လိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိတာက အခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ နည်းလမ်းရှာဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အတိတ်က အပေါင်းအဖော်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆက်သွယ်ရေးက တကယ်ကို အဆင်မပြေဘူး။အိပ်ငိုက်သူတွေဟာ စခရင်ပေါ်မှာ ခဏခဏ တဖျပ်ဖျပ်ဖျပ်ခတ်နေပြီး အိပ်ရာမဝင်ခင် ချတ်ထဲဝင်ပြီး ဝဘ်ကင်မရာကို ပိတ်ဖို့ မေ့သွားပုံပေါ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ကိစ္စတော်တော်များများမှာ သူတို့က ကျွန်မကို ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ ကျွန်မကို ခွင့်မပြုတဲ့သူတွေက စကားစမြည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖယ်မထားဘဲ အမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတယ်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုရှားရွာတဲလေး၏ရှုခင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာသော လူကြီးလူကောင်းအချို့က အာလူးပြုတ်ထုပ်ကို ငါးမိနစ်ခန့်ကြည့်ခဲ့ပြီး စကားပြောခန်းမှ အသံများကို လုံးဝတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေမှုကို ကျွန်တော် သဘောမပေါက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
စကားမစပ်၊ chatroulette တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော နောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု- အစောပိုင်းက အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူ၏ လိင်နှင့် အသက် (အခပေးစာရင်းသွင်းမှုဖြင့်) ကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့် ယောက်ျားလေးများအတွက်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် အခွင့်အလမ်းသည် သုညသို့ သိသိသာသာ ရောက်သွားတတ်ပြီး အမှန်တကယ်တော့ သူတို့အများစုသည် ဤနေရာသို့ ရောက်လာကြသည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အွန်လိုင်းပရောပရည်လုပ်ခြင်းသည် နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် အပင်ပန်းခံရှာဖွေမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
သို့သော် “သာမန်” ဆက်သွယ်ရေးကို ဆန့်ကျင်သူများ ရှိပါသည်။ထူးထူးခြားခြားပါပဲ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး စကားဝိုင်းထဲက တစ်ယောက်ဟာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သူထိုင်ပုံထိုင်ပုံအကြောင်း (သို့မဟုတ် သူ့စကားအားဖြင့် “ထမ်းဆောင်”) လိမ်လည်မှုအတွက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ 159 အရ ချို့ယွင်းနေသောကလေးဘဝအကြောင်းနှင့် ယခုအချိန်တွင် ပြန်မလည်စေရန် ထိန်းထားပေးသည့်အရာများအကြောင်း၊ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ၊ သမီးငယ်။အကျဉ်းထောင်တစ်ခုတွင်အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဥပမာ၊ Tomsk ဒေသထက် Novosibirsk ဒေသတွင်ထိုင်ခြင်းက ပိုအဆင်ပြေသည်။သူ့ကိုယ်ပိုင်အိမ် ဆောက်ချင်ပုံ၊ လက်အောက်ခံ ခြံတစ်ခုစပြီး ဒိန်ခဲချက်ပြုတ်နည်းအကြောင်း။သူသည် သူ၏ ညှပ်ရိုးများနှင့် ဒူးများတွင် လေဝင်လေထွက် နှင်းဆီပန်းများ တက်တူးများကိုပင် ပြသခဲ့သည်။ပထမကိစ္စတွင်၊ သူပြောသည့်အတိုင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ၊ သူပြောသည့်အတိုင်း သူသည် "ရဲများ၏ epaulettes ကို ဘယ်သောအခါမှ မတပ်ရ" ဟု ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဒုတိယမှာ - "သူသည် ရဲများရှေ့၌ ဘယ်တော့မှ ဒူးထောက်မည်မဟုတ်" ဟု ဆိုလိုသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော စကားဝိုင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး ၎င်း၏ဇနီးသည်- "Oleg, b****, you's *** al၊ အိပ်ရအောင်။""တောင်းပန်ပါတယ် zay" ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အဆက်ဖြတ်ခဲ့သည်။Oleg က ငါ့ကို တောင်းပန်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် - ဘယ်သူသိလဲ။
အသက် 14 နှစ်အရွယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ခက်ခဲသောကံကြမ္မာရှိသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးလည်း အဆက်မပြတ် “ပေါက်ထွက်သည်” နှင့် အစောပိုင်းမိခင်ဘဝအကြောင်း အဆင်မပြေသည့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
Pyatigorsk သည် Kabardino-Balkaria အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်၏ပြောဆိုချက်ကို အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကော့ကေးဆပ်မှ အသက် 50 ခန့်ရှိ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများသည် ဒေါသတကြီးထွက်ကာ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း အော်ဟစ်နေခဲ့သော်လည်း ဘာမှ နားမလည်ပါ။ ပထဝီဝင်။နောက်ဆုံးယူဆချက်မှာ ရေသန့်၏အမှန်တရားဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကိုယုံကြည်ပြီး google ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရာ မြေပုံပေါ်ရှိ အချက်နှစ်ချက်သည် ကီလိုမီတာတစ်ရာမျှသာ ခြားနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်အား သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း Seryoga အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူ။တော်ရုံတန်ရုံ အရက်မူးနေသူ၊ မျက်လုံးတွေ ရေတွေရွှဲပြီး "ယောက်ျားမငိုနဲ့" ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့သူ။
နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း လာလည်ကြပေမယ့် ရှားရှားပါးပါး အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရုရှားနဲ့ အထူးသဖြင့် ဆိုက်ဘေးရီးယားတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့ကြပါဘူး။စိတ်ကုန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ငါ chat မှာသုံးတဲ့ နာရီအနည်းငယ်က ငါ့အတွက် ပျင်းပုံရတယ်။အကြောင်းရင်းက ငါ့မှာရှိမရှိ မသိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါဟာ သူစိမ်းတွေနဲ့ အင်တာနက်မှာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအတွက် အရင်က စိတ်အားထက်သန်မှု ရင့်ကျက်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားလို့ပါပဲ။ဒါမှမဟုတ် လူတွေကိုယ်တိုင်က ပိုငြီးငွေ့လာပါပြီ - သူတို့ဟာ အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုခုကို ရောက်လာသလိုမျိုး ဖျော်ဖြေမှုပေးဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေပုံရပြီး၊ သူတို့က ဘာကိုမှ ပြန်မပေးချင်ပေမယ့်၊
ဒါပေမယ့် “ခရီးသွားဖော်ရောဂါ” က အလုပ်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ- မင်းစကားကို နားထောင်မယ့်သူတစ်ယောက်ကို မင်းရှာတွေ့ရင် စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အတွက် အများကြီး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်၊ ငါအမြဲဒီလိုလူစားမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။
Video chat Roulette သည် အဆင်ပြေသော အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆက်ဆံရေးအသစ်ကို လိုချင်သူတိုင်း၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အကြောင်းအရာများအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုသူ၊ သူငယ်ချင်းများဖွဲ့ကာ မိန်းကလေးများနှင့် တွေ့ဆုံလိုသူ၊ ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေသော အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနည်းလမ်းကို စမ်းကြည့်သင့်သည်။ဤအထူးပြုရင်းမြစ်သည် သင်ကဲ့သို့ပင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဆက်သွယ်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို စိတ်ဝင်စားသော သန်းပေါင်းများစွာသော အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါသည်။စကားဝိုင်း၏ရွေးချယ်မှုသည် သူ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်သည်၊ ၎င်းသည် ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျတို့မှ လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်။
မိန်းကလေးများနှင့် ဗီဒီယိုစကားပြောခြင်းသည် ယောက်ျားလေးများအား ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းစွမ်းရည်ကို လေ့ကျင့်စေပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် ချစ်သူရည်းစားဖွဲ့စေနိုင်သည်။ဤကျပန်းစကားပြောဆိုသူများကြားတွင် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဝိညာဉ်များ ရှိနိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။မိန်းကလေးများနှင့် Chatroulette သည် သင့်ဝိညာဉ်ဖော်ကို ရှာဖွေရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ထောက်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုကင်မရာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် စပီကာများ တပ်ဆင်ထားသော ကွန်ပျူတာရှိ မည်သူမဆို နယ်နိမိတ်မရှိသော အွန်လိုင်း ဆက်သွယ်မှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် ဗီဒီယိုရုပ်ပုံတစ်ပုံကို ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဤကိရိယာဖြစ်သည်။
အမည်တစ်ခုသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း ဗီဒီယိုချတ်သည် အမည်မသိသူများထက် စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်တွင် သင့်ကိုယ်သင် ပြသနိုင်ရန်၊ ကြိုဆိုသည့် ဗီဒီယိုအတိုကို ရိုက်ကူးရန် အကြံပြုထားသည်။
"Start Search" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် အလိုအလျောက်စနစ်၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါသည်။ဗီဒီယိုချတ်ဝင်းဒိုးတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စကားစမြည်ပြောဆိုသူ၏ပုံတစ်ခု ပေါ်လာသည်- လူတစ်ဦးကို သင်မြင်ကြားကြားသည်၊ သူသည် သင့်ကိုမြင်သည်၊ ကြားသည်။စကားဝိုင်း၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည် သင့်အတွက် စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်မရှိဟုထင်ပါက၊ “Next” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး လူသစ်ထံဆက်သွားပါ။
Video chat Roulette ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
ပထမဦးစွာ၊ ဗီဒီယိုချတ်သည် သာယာသော၊ စိတ်အေးလက်အေး ဆက်ဆံရေးအတွက် အသိမိတ်ဆွေအသစ်များကို ရှာဖွေရန် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များသည် မတူညီနိုင်ပါ။
ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကျော်လွှားပါ။ရှက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်မရှိခြင်းသည် ဘဝအတွက် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုချတ်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရရှိရန် ကူညီပေးသည်၊ စကားဝိုင်းသို့ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နည်းကို လေ့လာရန်၊ သူစိမ်းများနှင့် စကားစမြည်ပြောရန်၊ ပရောပရည်လုပ်သည့်တိုင် ကူညီပေးသည်။အမည်မဖော်လိုသူ၏အသိအမြင်၊ မော်နီတာစခရင်ဖြင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူနှင့် ခွဲခွာခြင်းအပြင် စကားပြောဆိုမှုကို အချိန်မရွေး အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး လုံခြုံရေးခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင့်အား ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာနှင့် လွတ်လပ်မှုခံစားရစေသည်။
စုံတွဲတစ်တွဲရှာဖွေခြင်း။မိန်းကလေးများနှင့် Chatroulette သည် သင့်အား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမရှိသော၊ သာယာသောအွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကို စတင်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည်၊ ၎င်းသည် သင့်အပေါ်တွင်သာမူတည်မည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။အော့ဖ်လိုင်းချတ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။လူများစွာအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုချတ်သည် စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် တွေ့ဆုံရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့။ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ အနီးနားမှာ ချစ်ရသူမရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တိုးလာနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် သူစိမ်းတစ်ဦးသည် သူ၏ဝိညာဉ်ကို သွန်ပစ်နိုင်ပြီး သူစိမ်းထံမှ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့နှင့် အကြံဉာဏ်ကောင်းများသည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
Chatroulette မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာနည်း
ရင်းနှီးရန်၊ စကားစမြည်ပြောရန်၊ ဗီဒီယိုချတ်တွင် ဆက်ဆံရေးစတင်ရန် လွယ်ကူသည်။စကားစမြည်ပြောဆိုသူသည် စကားစမြည်ကို ဦးစွာနှောက်ယှက်သောအခါ စိတ်မဆိုးပါနှင့်၊ လူတိုင်းကို ကျေနပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။မိန်းကလေးများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုချတ်သည် သင့်အား လူထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည်။ဖော်ရွေသော၊ သပ်ရပ်သော၊ ဖော်ရွေသော၊ လိမ္မာပါးနပ်သော၊ စကားပြောဆိုသူကို ဂရုတစိုက်ကြည့်ရန်ကြိုးစားပါ၊ သင့်အား စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးနှင့် သင်သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိပါ ၊ ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်လုပ်ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အသုံးဝင်သောလူသစ်များ သင့်ဘ၀တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အချက်များ- မိန်းကလေးများနှင့် Porn Chat Roulette- sex dating 18+
Sex chat Rouletteသည် ပြင်းထန်သော လိင်စိတ်ထကြွမှုတွင် ငြီးငွေ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းတစ်ခုသာမကဘဲ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် စကားပြောခြင်း၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာရှေ့တွင် အပြန်အလှန် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် ရာနှင့်ချီသော မှတ်သားထိုက်သော မိန်းကလေးများ သို့မဟုတ် ယောက်ျားလေးများထံမှ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော မိန်းကလေးများ သို့မဟုတ် ယောက်ျားလေးများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။အင်တာနက်ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ခေတ်သစ်ကမ္ဘာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို နည်းပညာများနှင့် ဖျော်ဖြေရေးများစွာဖြင့် တင်ဆက်ထားပြီး ဗီဒီယိုချက်တင်တွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်နိုင်စေခဲ့သည်မှာ သေချာပါသည်။ထို့အပြင်၊ virtual BDSM လိင်နှင့် ၎င်း၏အလွှာများအပါအဝင် အွန်လိုင်းလိင်ဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်အားလုံးသည် စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး၊ erotic webcams မှ မိန်းကလေးများသည် orgasm ရရှိရန်နှင့် webcam ပေါ်တွင် ဖြုန်းတီးရန် သင်ယူခဲ့ကြပါသည်။
မိန်းကလေးတိုင်းက ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ကြပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်းက မိန်းကလေးတိုင်း သူ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ကြပါတယ်။
ဆက်လုပ်ပါ၊ RuFreeChats ပေါ်တယ်တွင်၊ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် ၎င်းတို့လိုချင်သမျှကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ ချတ်တွင် အရာအားလုံးကို သင်ပြသနိုင်သည်၊ ဧည့်သည်များသည် အတွေးများ၊ ဆန္ဒများနှင့် စိတ်ခံစားမှုများဖြစ်လာသည်။ဤနေရာတွင်သာ - ချတ်၏အကြီးဆုံးရွေးချယ်မှု - သင်ရရှိနိုင်သည့်ပရိုဖိုင်များစွာထဲမှ သင်နှစ်သက်သည့်ပုံစံကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ သီးခြားအမျိုးအစားများနှင့် အမျိုးအစားများအဖြစ် စီထားခြင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးသောစကားပြောဆိုသူများ၏ ဤအွန်လိုင်းချတ်သို့သွားပါ၊ သင့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ရွေးချယ်ပြီး စတင်ပါ။ အခုတလောပျော်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ချက်တင်ပေါ်တယ်ကို နာရီပတ်လုံး ရနိုင်သည်၊ သင် စာရင်းသွင်းသင့်သည်ဖြစ်စေ၊ မရေးသင့်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်တစ်ခုအား ပူပူနွေးနွေးတွေးခေါ်ကာ ပါဝင်ပါ၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဝဘ်ကင်မရာများရှေ့တွင် တကယ့်မိန်းကလေးများနှင့် အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
ဝဘ် ထုတ်ယူခြင်း- တိုက်ရိုက်လိင်ချိန်းတွေ့မှုအတွက် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုချတ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့၊ မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေးတွေ၊ အမျိုးသမီး ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားတွေနဲ့ အရာအားလုံးကို ပြသနိုင်တဲ့porn chat voyeurs နှင့် exhibitionists များ၏ RuFreeChats.com လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်၊ လူတော်တော်များများက ၎င်းကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုပြီး ကျေနပ်ကြသောကြောင့် ပိုက်ကွန်ပေါ်တွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အသစ်အဆန်းမဟုတ်သည်မှာ ကြာရှည်စွာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် သို့မဟုတ် ကြောက်စရာကောင်းသည့် အရာမဟုတ်ပေ။အဆိုပါအွန်လိုင်းဝဘ်ကင်မရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။
- ယခု တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမုဒ်တွင် အတုအယောင်ယူဆောင်မှုတွင် ပါဝင်ပါ၊ စစ်မှန်သော စကားစမြည်ပြောဆိုသူများနှင့် သင်၏သွေးဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပါ။
- sex chat ကစားတဲ့ 18+ သည် ခံစားမှုအသစ်များကို ပေးသည်၊ မည်သည့်မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောက်ျား၊ မိန်းမ သို့မဟုတ် ယောက်ျားသည် သင့်ထံတွင် ပါဝင်မည်ကို မည်သူမျှ ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍ မရပါ။
- ချက်တင်ကစားတဲ့ မှာ သင်ကိုယ်တိုင်က webcam မှာ ဆက်သွယ်မှုမှာ နယ်နိမိတ်တွေ သတ်မှတ်ပြီး အရာအားလုံးကို သင်ပြသနိုင်ပါတယ်။
- ကျပန်းစကားပြောဆိုသူတစ်ဦးနှင့် erotic video chat တွင်၊ သင်သည် သီးခြားလူတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မှုအဆင်မပြေပါက "Next" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်စကားပြောဆိုသူကို ရွေးချယ်ပါ။
Porn Roulette- အခြားချတ်များ 18+ နှင့် ကွာခြားချက်
ဝဘ်ကင်မရာမော်ဒယ်များနှင့် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်း။ပုံမှန်စကားပြောပါ။ချတ်ကစားတဲ့ 18+
သင့်စကားပြောဆိုသူကို ကြိုတင်မြင်ရပြီး ဝဘ်ကင်မရာမော်ဒယ်များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း 18+ နှင့် ဝဘ်ကင်မရာပေါ်တွင် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘဲ ဝဘ်ကမ်ဆက်သွယ်မှု
ရိုးရှင်းသောကလစ်ဖြင့်၊ သင်သည် သူစိမ်း၏အလိုရှိသော လိင်အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူကို ကြိုတင်ရွေးချယ်ပါ။
မော်ဒယ်များသည် webcam တွင် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ယေဘူယျ ချတ်၊ အဖွဲ့မုဒ် သို့မဟုတ် သီးသန့်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သာမန် streamer သို့မဟုတ် ဘလော့ဂါများ ဖြစ်နိုင်သည့် တကယ့်လူများနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချက်များမပါဘဲ သူစိမ်းနှင့် အသိအကျွမ်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း။
အွန်လိုင်းရှိ webcam မော်ဒယ်များ၏ ပျမ်းမျှ အရေအတွက်- 3000 ခန့်
အများအားဖြင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသူနှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူ အရေအတွက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူတစ်ဦးနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်၊ သင်သူစိမ်းမည်မျှတွေ့ဆုံနိုင်သည်ကို တွက်ချက်ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
မတူညီသော အသက်အရွယ်နှင့် အမျိုးအစားများ- ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများအရ လွယ်ကူသော လမ်းညွှန်မှုနှင့် ရွေးချယ်မှု
အသက်အများစုသည် 18 နှစ်အောက် (အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ)၊ ဘလော့ဂါများနှင့် အသက် 30+ အထက် ထုတ်လွှင့်သူများ
ဝဘ်ကင်မရာပေါ်တွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကို ရှာဖွေနေသည့် မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို လုံးဝ
စာရင်းဇယားများအရ erotic chat အသုံးပြုသူအများစုမှာ - 50% ခန့် - ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ 18 မှ 35 နှစ်, 35+ အထက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ - လည်း 50% ။
အသက် 10 နှစ်မှ 18 နှစ်ကြား ပုံမှန် စကားပြောခန်းများသို့ ဧည့်သည်များ အမျိုးအစားမှာ 32% ခန့်၊ အသက် 45+ - 68%၊
ဧည့်သည်များ - 40% ခန့် - အသက် 35 နှစ်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသားများ၊ 20% ခန့် - ယောက်ျားလေးများ (18-25+) နှင့် 35% - အသက် 18 နှစ်မှ 24 နှစ်ကြား မိန်းကလေးများ၊ ကျန်အမျိုးသမီးများမှာ အသက်၊
Chat Roulette - ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ webcam ရှေ့မှာ virtual ဂိမ်းတွေအတွက် အချိန်ရောက်ပါပြီ။
ရိုးရှင်းသော ချက်တင်ကစားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုတွင် စံဆက်သွယ်ရေးကို သင်ငြီးငွေ့နေပါက၊ ယခင်က လုံးဝမသိသောလူတစ်ဦးနှင့် ဝဘ်ကင်မရာရှေ့တွင် အတုအယောင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ဖြစ်သည်။ဆူညံသောမော်ဒယ်များ- အသက် 18+ မိန်းကလေးများ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသမီးများ 25+ နှင့် 35+ အထက် အမျိုးသမီးများပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရုရှားစကားပြောခန်းတွင် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် ငြီးငွေ့ပြီး ဝမ်းနည်းစေမည်မဟုတ်ပါ။နာရီလက်တံဖြင့် ကာမစိတ်ရှိသော မိန်းမပျိုလေးများသည် ၎င်းတို့၏ ပရိသတ် အတော်လေး လွတ်မြောက်လာသောအခါတွင် အလွန် လွတ်မြောက်ပြီး နေထိုင်ကြသည်။၎င်းတို့၏လှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့် နာရီလက်တံအလှများသည် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကို ၎င်းတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကို အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊၊ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ်သည် ဝဘ်ကင်မရာကို လှုပ်နှိုးရန် ကြီးမားသော ရင်းနှီးသောဆန္ဒများစွာဖြင့် နိုးထလာပါသည်။ဆိုးရွားသော ဝဘ် XXX မော်ဒယ်များသည် လှပသော မျက်နှာနှင့် သွယ်လျသော အသွင်အပြင်ဖြင့် စကားပြောခန်းတွင် ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ မရှိသောကြောင့် အလွန်ဒုစရိုက်ပြုမူ၊အရွယ်မရောက်သေးသူများ လာရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသော အွန်လိုင်းတွင် ရင်းနှီးသောဂိမ်းများအတွက်erotic ကစားတဲ့ကစားနည်း ။
ညစ်ညမ်းချက်တင်ကစားတဲ့ဂိမ်းသည် webcam ပေါ်ရှိ သင်၏စကားပြောဆိုသူပုံစံဖြင့် ချက်ချင်းအွန်လိုင်းတွင် ရင်းနှီးခွင့်ရရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပေးသည်.အတော်အတန်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူ၊ ငယ်ရွယ်ပြီး ရင့်ကျက်သောကြက်များသည် တဦးချင်းမုဒ်တွင် ဝဘ်ကင်မရာ၏ရှေ့တွင် အေးမြတက်ကြွသော virtual လိင်ဆက်ဆံမှုကို ပေးသည်။လက်တွဲဖော်ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် နှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုံ့ဆော်လိုသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော မင်းသမီးများသည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းနှီးသော ပုံပြင်များကို အမျိုးမျိုး အဆိပ်ခတ်ရန် စတင်ကြသည်။မိန်းကလေးများနှင့် လိင်ဗီဒီယိုချတ်ကစားတဲ့ ဆယ့်ရှစ်ခုပေါင်းကို Wirth နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သော မော်ဒယ်များဖြင့် နေထိုင်သည့် Wirth ချစ်သူများအားလုံးက သဘောကျကြသည်။အပျော်အပါးမိန်းကလေးများသည် ကြည့်ရှုသူတိုင်းနီးပါး အမျိုးသမီး၏ဆွဲဆောင်မှုအားလုံးကို အသေးစိတ်ကျကျ အလွယ်တကူမြင်နိုင်စေရန် ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်ကင်မရာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။မိန်းကလေးများနှင့် ဤဗီဒီယိုချတ်တွင်၊ သင်သည် စနစ်ကိုယ်တိုင်က ကျပန်းပေးဆောင်ထားသည့် နှစ်သက်ရာမိန်းကလေးကို ရွေးချယ်ပြီး အမိုက်စား virtual ရှိုးများကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် နေ့စဉ်အကြောင်းအရာများပေါ်တွင် ချတ်လုပ်ရုံဖြင့် နှစ်သက်သည်။အမှန်တော့ ဆန္ဒရှိရင် စာရင်းသွင်းလို့ရတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးက အခမဲ့၊
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့်အတူ ညစ်ညမ်းချက်တင်ကစားတဲ့ 18+ အွန်လိုင်းအားသာချက်များ
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူတစ်ဦးနှင့် ခြေပုန်းခုတ်၊ ဖန်သားပြင်၏အခြားတစ်ဖက်တွင် သင့်ရှေ့တွင် မည်သူပေါ်လာမည်ကို သင်မသိနိုင်ပါ။
၎င်းသည် စာသားဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် webcam ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက် ချတ်တစ်ခုသာမကဘဲ တကယ့်လူများနှင့် ပြည့်စုံသောကွန်ဖရင့်တစ်ခု - သင်အရာအားလုံးကိုပြသနိုင်သည့် ချတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျပန်းမိန်းကလေးများ သို့မဟုတ် လူမျိုးမတူသော အမျိုးသားများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ လွတ်လပ်သော ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုအတွက် အခွင့်အလမ်းကို ပေးလိမ့်မည်။
အမည်မသိမုဒ်တွင် webcam တစ်ခုပေါ်တွင် အပြန်အလှန်နောက်ပြောင်မှုများ ပြုလုပ်နေချိန်တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အထင်ကြီးဖွယ်ရာများကို သင့်အား ရရှိရန် အခွင့်အရေးပေးပါမည်။
သင့်အား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်နိုင်ပြီး ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် webcam ပေါ်ရှိ အပြည့်အ၀ ပူးတွဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ခံစားခွင့်ပြုပါမည်။
နွေးထွေးသောအဖော် သို့မဟုတ် စိတ်အားထက်သန်သော macho ၏ကုမ္ပဏီတွင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အခမဲ့နာရီကို ကုန်ဆုံးရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
အခုပဲ virtual porn video chat မှာ ဘဝသစ်ကို စတင်လိုက်ပါ။ဥပမာအားဖြင့်၊ RuFreeChats.com web pickup chat မှမိန်းကလေးများကိုယ်တိုင်က ၎င်းအား အားစိုက်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ငွေရှာရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြပြီး အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိသည်။အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ ဝဘ်ကင်မရာဆိုဒ်များတွင် လူကြိုက်များသောမော်ဒယ်များ အချိန်တိုအတွင်း ငွေများစွာရနိုင်သည်။ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သင်ဟာ ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းပြီး webcam မှာ သဘာဝအတိုင်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြေဖို့၊ webcam မှာ orgasm ရယူပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ webcam ပေါ်မှာ ဖြုန်းတီးဖို့ လိုပါတယ်။
တားမြစ်ထားသော မိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများ လာဖွင့်သည့် ချတ်ကစားတဲ့ 18+
RuFreeChats.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဖောက်သည်များအတွက်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ တားမြစ်ခံထားရသော လူများ အများအပြား ရှိနေခြင်း ၊ စတော်ဘယ်ရီ 18+ အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေခြင်း ၊ စတော်ဘယ်ရီသီး 18+ တစ်လုံးအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေသော ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများ သည် စတော်ဘယ်ရီ အော်ဂဇင် ဖြင့် ပြီးဆုံးအောင် လုပ်နည်းကို သိသော ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည် ၊ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးအတွက်ရွေးချယ်မှု။sex video chat ကစားတဲ့ မှာ သင်ဟာ အရာအားလုံးကို ပြသနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်း ဖြစ်နေတာကြောင့် အဇီဇာအရှိဆုံးလူကိုတောင် ကျေနပ်နိုင်မှာပါ။
ထို့အပြင်၊ လိင်ရှိုးများကြည့်ရှုရန်နှင့် အွန်လိုင်းစကားပြောခန်းတွင် မိန်းကလေးများကို ခေါ်ယူရန် စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ခြင်း မရှိခြင်းသည် သင့်ဒေတာကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ခြင်းထက် မပိုပါ။ဆိုလိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်သည် ကြည့်ရှုသူများ၏ အမည်ဝှက်နှင့် ၎င်းတို့၏ဒေတာလုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝအာမခံနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ကျပန်းစကားပြောသူနှင့် စကားစမြည်ပြောခြင်းအကြောင်း လူကြိုက်များသောမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်း။
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် လိင်စကားပြောဆိုခြင်းသည် စိတ်ဝင်တစားရှိသောကြောင့် သင်၏ erotic interlocutor ဖြစ်လာမည်ကို သင်မသိနိုင်ပါ။ရွေးချယ်ထားသောလိင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဝဘ်ကမ်တစ်ခုပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသော သာမန်လူတစ်ဦးကို ဝဘ်ဆိုက်က ကျပန်း (ကျပန်း) ပေးပါမည်။ထို့ကြောင့် တဦးချင်း လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည့် အတုအယောင် ပါတနာ သို့မဟုတ် လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါသည်။
လုံးဝမှန်တယ်။၎င်းသည် ဝဘ်ဆိုက်၏ လှည့်စားမှုကိုသာ ပေါင်းထည့်သည်။ဘယ်သူက စကားဝိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို သင်ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်ပေမယ့် အခြေအနေအရတော့ မော်ဒယ်ကို ပြောင်းလဲပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် ပိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် စကားပြောခန်းတွင် အရာအားလုံးသည် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။virtual model အများစု၏ရွေးချယ်မှုနှင့် erotic စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ်တိုင်မှ။သို့သော် ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် စကားစမြည်ပြောသည့်ဧည့်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးကို တမူထူးခြား၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားလေ့မရှိပါ၊ အားလုံးသည် တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွင် စိတ်ခံစားချက်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်များသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ဘယ်တော့မှ မတွေ့ဆုံကြသော်လည်း sex chat ကစားတဲ့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သော webcam မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသောကြောင့် အစည်းအဝေးများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများက အမည်မသိနဲ့ ပရိသတ်ကို သီးသန့်ပုံစံနဲ့ လုပ်ကြတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ဒါက သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အာမခံချက် ဖြစ်ပေမယ့် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- သင်နှစ်သက်သောလူနှင့် လက်တွေ့ဘဝတွင် တူညီသောပုံစံအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို သင် မတူညီနိုင်ပါ။ဤချတ်တွင် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိဘဲ အရာအားလုံးကို သင်ပြသနိုင်သည်။
👉 ကျပန်းစကားပြောခန်းတစ်ခုတွင် ချစ်စရာဝဘ်မော်ဒယ်တစ်ဦးနှင့်တွေ့ခဲ့သည်၊ ဝဘ်ကင်မရာတွင် ဆက်လက်စကားပြောဆိုရန် သူမကို ယခု မည်သို့ရှာနိုင်မည်နည်း။
- ထိုသို့သောကိစ္စများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှာဖွေရေးမုဒ်တစ်ခုရှိပြီး၊ စကားအစပ် သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားသော စကားဝိုင်း၏ အမည်ပြောင် သို့မဟုတ် စာမျက်နှာလိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပါ၊ ရှာဖွေပြီး သင်စိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ဆက်သွယ်ပါ။
- အခြားသူများကဲ့သို့ပင် ဆဲဆိုရိုင်းစိုင်းခြင်း မပြုသင့်ပါ။စမ်းချောင်းများတွင် ပေါ်လာမည့် ကြုံရာကျပန်းလာရောက်သူအားလုံးကို လေးစားမှုရှိရန် ကြိုးစားပါ၊ သူတို့ကို နှိမ့်ချစော်ကားရန် မလိုအပ်ပါ။
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူနှင့် Erotic ချတ်လုပ်ခြင်း- အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ကစားတဲ့ (18+)
virtual sex တွင် အားသာချက်များ ရှိပါသေးသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင် အရူးလုပ်နေစဉ်တွင် သင်သည် ရေနွေးအိုးထည့်ကာ ပီနံနှစ်ထုပ်စားကာ ဆေးလိပ်သောက်နိုင်သည်။
ကျပန်းစကားပြောဆိုသူများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုတွင် webcam တွင် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအတွက် သိကျွမ်းလာခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကဲ့သို့ လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ- လိင်ချတ်ကစားတဲ့ 18+ သည် အွန်လိုင်းတွင် အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သော အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးများ သို့မဟုတ် ယောက်ျားလေးများကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။တိုက်ရိုက် webcam porn ထုတ်ယူမှုသည် ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး မိန်းကလေးများသည် အွန်လိုင်းတွင် တိုက်ရိုက် webcam တွင် အော်ဂဇင်ရရှိကြသည်။ အမိုက်စား မော်ဒယ်များနှင့် ချတ်လုပ်ကာ သင်နှစ်သက်သည့်တစ်ခုကိုသာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သင့်စိတ်ခံစားချက်အရ, သင်နှစ်ဦးစလုံးကြိုက်ပါလိမ့်မယ်, သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာအလှည့်ကျချတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်၊ တကယ်တော့ သင်ဟာ စံပြုလိင်ဆက်ဆံမှု ဗီဒီယိုကို ငြီးငွေ့နေတာ ကြာပါပြီ၊
မိဘများအတွက် အချက်အလက်- ကလေးများအတွက် မဟုတ်ပါ |စည်းမျဉ်းများနှင့် လုံခြုံသော ပရိုတိုကော |DMCA လိုက်နာမှုနှင့် ကွတ်ကီးမူဝါဒ |စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု 18 USC 2257
မူပိုင်ခွင့် © 2022-2022 နှစ်။rufreechats.com ဆိုက်သည် အသက် 18 နှစ်အထက်သူများအတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် အသက် 18 နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက လူကြီးများအတွက် erotic site မှ ချက်ချင်းထွက်ခွာရပါမည်။
Chat Roulette ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်သလဲ- ဘာလုပ်ရမလဲ
Chat Roulette ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်တာလဲလို့ ဖြေဖို့ မလွယ်ပါဘူး။World of Accessသည် ပြဿနာများ၏ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများကို စုဆောင်းပြီး ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့သည်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပါးခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းနိမ့်ခြင်းသည် Chatroulette အလုပ်မလုပ်ရခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။အင်တာနက်ချန်နယ်၏ ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
ဆာဗာပေါ်တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်နေပါက Chatroulette သို့ ဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲလိမ့်မည် - ခဏစောင့်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Roulette ပါသည့် စာမျက်နှာကို မဖွင့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သည် - ၎င်းကို ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်သည်။သင်အသုံးပြုနေသောဘရောက်ဆာရှိ ကက်ရှ်ကိုရှင်းလင်းပြီး စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ရန် အသုံးဝင်သည်။
စနစ်တွင် Adobe Flash Player ဗားရှင်းဟောင်းကို ထည့်သွင်းပါက၊ ပလေယာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက Roulette အလုပ်မလုပ်ပါ။Flash Player ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ သင်သည်သင်၏ဘရောက်ဆာကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို ချို့ယွင်းမှုပြဿနာသည် ဘရောက်ဆာကိုယ်တိုင်၌ တည်ရှိသည် - သင်သည် အခြားဘရောက်ဆာကို အသုံးပြု၍ Chatroulette သို့ ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည်။မကြာခဏဆိုသလို ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် ChatRoulette အလုပ်မလုပ်သနည်းဆိုသည့်မေးခွန်းကို ဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးသည်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုယ်တိုင်က - အသုံးပြုထားသော IP လိပ်စာဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သည့် ကိစ္စများလည်း ရှိပါသည်။သင်သည် router ကို ပြန်လည်စတင်ရန် သို့မဟုတ် VPN သို့မဟုတ် အမည်ဝှက်ကို အသုံးပြု၍ IP လိပ်စာကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
Chatroulette သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်း စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူက ပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည် - ၎င်းသည် အလုပ်တွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသည်။
Chat Roulette မဖွင့်ရသည့် ရှားပါးအကြောင်းရင်းမှာ စနစ်ထဲတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ သင်သည် antivirus software ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနောက်စကင်န်တစ်ခုကိုဖွင့်သင့်သည်။ဗိုင်းရပ်စ်များကို တိုက်ဖျက်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ Kaspersky Anti-Virus ဖြစ်သည်။
Chatroulette တွင် အနက်ရောင် ဖန်သားပြင် ဘာကြောင့် ရှိနေတာလဲ။
ဗီဒီယိုချတ်တွင် အနက်ရောင်ဘယ်ဘက်ဝင်းဒိုးရှိပါက၊ အကြောင်းရင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးပါ။သူတို့အကြောင်း - နောက်ထပ်။
ဝဘ်ကင်မရာကို ချိတ်ဆက်မထားပါ - ၎င်းသည် မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာရန် လိုအပ်သည်။ဒရိုက်ဗာများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းတို့ကလည်း ကူညီပေးသည်။
Chatroulette သည် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ကင်မရာကို မတွေ့ပါက၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။၎င်းတို့ကို ပြီးအောင်လုပ်ရမည် - ChatRoulette တွင် ပုံမပေါ်သေးပါက၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ webcam သည် နောက်ကျနေပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ChatRoulette မစတင်မီ၊ Roulette ကိုယ်တိုင်နှင့် တဘ်မှလွဲ၍ ဘရောက်ဆာ တက်ဘ်များအားလုံးကို အမြဲပိတ်သင့်သည်။
မကြာခဏ ဝဘ်ကင်မရာသည် မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် Chatroulette တွင် ပုံတစ်ခုကို ပေးစွမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်၊ သင်သည် ဤဝဘ်ကင်မရာ၏ ID ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ်- ဥပမာ- http://anti-banner.com/
ဗီဒီယိုချတ်သည် flash player ကိုအသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ခေတ်နောက်ကျနေပါက Chatroulette လည်း အလုပ်မဖြစ်ပါ။ပလေယာကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
Chat Roulette ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါက အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးကို ပြန်လုပ်ပါ။
Chatroulette တွင် ညာဘက်တွင် အနက်ရောင်ပြတင်းပေါက် ဘာကြောင့် ရှိနေတာလဲ။
စကားဝိုင်းပြတင်းပေါက်သည် အနက်ရောင်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ-
ဝဘ်ကင်မရာများထဲမှ တစ်ခု အလုပ်မလုပ်ပါ။
မြန်နှုန်းနိမ့်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုသည် - ရုပ်ပုံသည် နောက်ကျမှရောက်လာပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အနက်ရောင်စခရင်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။
အပိုအပလီကေးရှင်းများ လည်ပတ်နေသည် - ၎င်းတို့သည် အသွားအလာကို စားသုံးပြီး အရှိန်လျှော့သည်။
အဘယ်ကြောင့် Chatroulette အေးခဲသနည်း။
chatroulette ရပ်တန့်သွားပါက၊ သင်သည် "Task Manager" ကိုဖွင့်ပြီး CPU မည်မျှအလုပ်ရှုပ်သည်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
Chatroulette သည် နှေးကွေးစွာ အလုပ်လုပ်နေပါက၊ သင့်တွင် ဘရောက်ဆာ တက်ဘ်များစွာကို ဖွင့်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များ ဖွင့်ထားနိုင်သည်။၎င်းတို့ကို ပိတ်ပြီး သင့်ကွန်ပျူတာကို ပြန်လည်စတင်ရန် အကြံပြုထားသည်။ထို့နောက် Chatroulette ကို ထပ်မံဖွင့်နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုချတ်သည် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ဘရောက်ဆာကိုလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်သင့်သည်။Google Chrome ကဲ့သို့ ယုံကြည်ရသော ဘရောက်ဆာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသည်။ဒါက ဘာကြောင့် Chat Roulette အလုပ်မလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးတယ်။